व्हिस्की-उद्योग समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह) को प्रशंसा गर्नुहोस्
व्हिस्कीको प्रशंसा गर्नुहोस्
व्हिस्कीले पनि चीजहरू निको पार्न सक्दैन, यो पहिले नै आशाहीन छ। व्हिस्की पिउन सुरु गर्नेहरूका लागि, व्हिस्की पिउने तरिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ! त्यसोभए, व्हिस्की कसरी पिउने उत्तम? एक नजर हेरौं!
हामीले स्वाद व्हिस्कीको समयमा पानी कहिले जोड्नु पर्छ?
नाक र मुखले शुद्ध व्हिस्कीको अनुभव गरेपछि, तपाईंले गिलासमा पानीको केही थोपा थप्न सक्नुहुन्छ र गन्ध र मुखले व्हिस्कीको स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। निश्चित गन्धहरू समात्न गाह्रो वा धेरै हल्का हुन्छ। पानी थप्न र सही स्वाद व्हिस्की चरणहरू धेरै पटक दोहोर्याउनुहोस् सबैभन्दा पूर्ण र समृद्ध सुगन्ध फेला पार्न। धेरै पानी थप्न सावधान रहनुहोस्, अन्यथा त्यहाँ कुनै व्हिस्की स्वाद हुनेछैन।
यदि तपाईं कुनै सुगन्ध छुट्याउन असमर्थ हुनुहुन्छ भने, सास फेर्नु वा बरफको पानी पिउनु र फेरि स्वाद गर्न सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ।
व्हिस्कीको स्वाद लिनुहोस्
यो व्हिस्कीको लागि सानो चुस्की लिनुहोस् र तरललाई तपाईंको जिब्रोमा प्रवाह गर्न दिनुहोस्। यो गर्दा तपाईं कुरा गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। जिब्रोले यस समयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ किनकि जिब्रोका विभिन्न भागहरूमा व्हिस्कीको लागि फरक भावनाहरू हुन्छन्।
नाक पछि गन्ध
जब व्हिस्की मुखमा तपाईको घाँटी तल बग्छ, जसले "पोस्ट-नासल स्निफ" उत्पादन गर्न सक्छ, यसको मतलब यो सुगन्ध तपाईको मुखको पछाडिबाट तपाईको नाकमा प्रवेश गर्दछ। जब हामी व्हिस्की निल्ने, व्हिस्कीको कपलाई हाम्रो नाकको अगाडि राख्छौं, हामीले पहिले व्हिस्कीको गन्धमा अलिकति भिन्नता देख्नेछौं। यो अचम्मको छैन? जे भए पनि, तपाईंले अर्को व्हिस्की स्वाद गर्नु अघि aftertaste हटाउन केही पानी पिउन नबिर्सनुहोस्।
लार ग्रंथि को भूमिका
जब तपाइँ व्हिस्की सुन्नुहुन्छ वा तपाइँको पहिलो चुस्की व्हिस्की लिनुहुन्छ, तपाइँ अनजानमा लार उत्पादन गर्नुहुनेछ। जुन सामान्य छ र तपाईंको व्हिस्कीको स्वाद अझ राम्रो बनाउनेछ। किनभने जब अल्कोहल र्यालसँग मिसिन्छ, तरल चिनीमा परिणत हुन्छ, जसले व्हिस्कीको स्वाद अझ गोलो र चिल्लो बनाउन सक्छ।
के हामीले व्हिस्की चाख्दा थुक्नु पर्छ?
विभिन्न मानिसहरूले यसलाई फरक तरिकाले गर्नेछन्, कोही भन्छन् कि तपाईंले व्हिस्कीको पूर्ण स्वाद तपाईंको घाँटीमा नआएसम्म स्वाद लिन सक्नुहुन्न। अरूहरू ठीक उल्टो छन्। त्यसोभए तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाई गर्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाईंले आत्मा निल्ने छनौट गर्नुभयो भने, कृपया एकैचोटि धेरै स्वाद नगर्नुहोस्, नत्रता तपाईं स्वादको अन्त्यमा पुग्नु अघि नै पतन हुनुहुनेछ।
अघिल्लो: व्हिस्की स्वादको अन्त्यमा हामीले केमा बढी ध्यान दिनुपर्छ?
अर्को: व्हिस्की कसरी प्रशंसा गर्ने?